Korneyl cRisaaq M Aadan: “Galmudug baa weerar soo qaaday waana la iska caabiyey” – Radio Daljir
Oktoobar 26, 2017 3:01 g 0
Inta la ogyahay in ka badan 10 qof ayaa ku dhintay, dhaawucuna sodomeeye kor buu u dhaafay dagaal saaka subaxnimadii ka biloowday deegaanka Xaafoodle oo koonfur bari Godad kaga beegan. Dagaalka ayaa sida wararka aan ku heleyno waxa uu dhexmaray ciidamada Puntland ee aagga Godad iyo Gacnafale iyo kuwa Galmudug.
Dhaawacyadii dagaalka ee labada dhinac ayaa isla maanta la soo gaarsiiyey isbitaalada Guud ee Gaalkacyo.
Korneyl Cabdirisaaq Maxamed Aadan oo kamid ah Saraakiisha Puntland, kuna sugan aagga dagaalka ayaa noo suurtowday in aan mar dhaweyd khadka taleefoonka ku helno, waxa uuna nooga waramaya dagaalka deegaanka Xaafoodle. Waxa uu u waramay Jamaal Faarax Aadan.